Roobab ka da’ay Isku-shuban, Bari iyo welwel laga muujiyay togaga biyaha(Sawiro) – Radio Daljir
Nofeembar 5, 2012 2:17 g 0
Bosaso, Nov 05 – Roobab siweyn loogu diirsaday ayaa ka da’ay degmada Isku-shuban ee gobolka Bari, taasi oo qayb ka ah roobabka dayrta ee ka bilowday deegaanada Puntland, waxaa roobabkan ay kusoo beegmayaan xilli shan sanadood inka badan deegaanada miyiga ay ka jireen abaaro iyo jiilaal si wayn u dhibaateeyay dadka iyo xooluhuba.
Nolosha shacabka degmada Isku-shuban ayaa ku tiirsan tacabka beeraha sida khudaarta kalle duwan ee gobolka Bari laga isticmaallo iyo dhaqashada xoolaha geella, ariga iyo lo’da, taasi oo beeralayda deegaanka iyo xoolo dhaqataduba ku dhiirigalinaysa inay ka faa’iidaystaan roobabka.
Gudoomiyaha degmada Isku-shuban C/risaaq Muuse Cartan oo la hadlay radio Daljir? ayaa ka codsaday dowladda Puntland iyo hay’aduhuba inay gacan ka gaystaan walaac laga qabo khasaaro ka yimaado dhinaca toggaga deegaanka uu caanku ku yahay, kuwaasi oo biyaha ay ka saramareen 4mtr.
Waxaa uu sheegay hadii aan wax laga qaban biyaha togaga ka saramaray ay khasaaro badan soo gaarsiin doonaan shacabka degmada, maadaama carro badan ay xireen goobihii biyaha mari jireen halisna loogu jiro daadadka togga inay kusoo rogmadaan degmada.
Radio Daljir waxa uu aqristayaashiis uu usoo gudbinayaa sawirada degmada Isku-shuban iyo goobaha kalle taarqiga ah ee degmada.